अब एकल पुरुषलाई पनि विदुर भत्ता दिइने ! - Mitho Khabar
अब एकल पुरुषलाई पनि विदुर भत्ता दिइने !
June 24, 2022 mithokhabarLeaveaComment on अब एकल पुरुषलाई पनि विदुर भत्ता दिइने !
हेमन्त केसी/सुर्खेत l जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले ६० वर्षमाथिका विदुर पुरुषलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यो लागू हुनेगरी उक्त नियम जारी गरिएको छ । पछिल्लो समयमा यहाँ छोराले बुहारी ल्याउने बित्तिकै बुढाबुढीलाई अलग्गै राख्ने प्रचलन बढेको छ ।
जसले उनीहरू बिचल्लीमा परेको देखिन्छ । अहिले एकल महिलासँगै एकल पुरुषले पनि समस्या भोगिरहेका धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन्। एकल पुरुषका समस्या बुझेर विदुर भत्ता उपलब्ध गराउन थालिएको नगरप्रमुख डम्बर रावतले बताए।
एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीका लागि आयो खुशीको खबर
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्ने !